भाडाको गाडीमा जोर विजोरले कोरोना बढाउँछ - Sarangkot NewsSarangkot News
भाडाको गाडीमा जोर विजोरले कोरोना बढाउँछ
2 February, 2022 9:15 am
पोखरा : कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट ओमिक्रोनको आगमनले फेरी आतंक मच्चिएको छ । देश विदेशका खवर अहिले अधिंकास नेपालीहरुको हात हातमा आइपुग्छन् त्यसैले कोरोना महामारीका वारेमा जनताले स्वयम् पनि वुझ्ने गरेका छन् । दोस्रो भेरियन्टको कोरोनाले हैरान खेलाएपनि तेस्रो भेरियन्टको प्रभाव न्यून पाइन्छ ।
निरन्तर आफ्नो लयमा फर्कदै गरेका आम नागरिकका व्यवसायमा ब्रेक लगाउने काम कोरोनाले गरेपनि त्यो भन्दा बढी त्रास राज्यबाट हुने गरेको छ । राज्यले कोरोनालाई अलिक वढि नै महत्व दिएर जनताको दिनचर्या माथि नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने कार्य भएको स्पष्ट देखिन्छ। रोकिनु पर्ने व्यवसाय हरु खुल्लै छैन, संयौको चहलपहल भइरहने ठूला व्यापारिक महल खुल्ला गरिएका छन् तर हजारौंको जमघट हुने खेल मैदान रोकिएको छैन राष्ट्रिय खेलकुदहरु भइरहेका छन् तर स्कुल, क्याम्पस वन्द गरिएका छन् । सरकारको पहिलो निसाना नै विद्यालय र क्याम्पस हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं नेपालकै सर्वाधिक भिडभाड हुने शहर हो । त्यहाँका सार्वजनिक यातायात सेवालाई सरकारले जोर विजोर चलाउन आदेश दियो । सरकारले त्यो निर्णय कोरोनाबाट बचाउन हैन सार्न मलजल ग¥यो । आम सर्वसाधारण नागरिक चढ्ने सवारीलाई आधा घटाइदिँदा २० जनाले यात्रा गर्ने वसमा ४० जना कोचिएर चढ्न वाध्य भएका छन् । त्यहाबाट कोरोना सार्ने कार्यलाई मलजल पुगेको छ । सामाजिक दुरी कायम राख्न वढी सवारी चलाएर कम यात्रु राख्न लगाउनु पर्नेमा उल्टो गतिविधि गरिएको छ ।
राज्यका उच्च अधिकारी हुन या सत्ताका संचालक तिनले गर्ने काम कारवाही विवेक पु¥याएर दीर्घकालिन हितमा गर्नु पर्छ । नेपालमा किन कोरोना वढ्यो, ५ लाख जनता नारायणी तिरमा खांदिए । टुडिखेलमा एक लाख वढी जनता कोचिए । तर दोष क्याम्पस र विद्यालयलाई दिइएको छ । सामाजिक दुरी कायम गरेर जाँच दिन पाएका छैनन् । उता खेलकुदमा निर्वाध छुट दिइएको छ ।
के कोरोना राजनीतिक भिडमा, खेलको झुडमा लाग्दैन ? त्यसो हो भने प्रमाणित हुनुपर्छ नत्र यातायातबाट कोरोना सार्ने काम वन्द गरिनुपर्छ नीजि सवारीलाई जोर विजोर चलाएर आम नागरिकले चढ्ने सार्वजनिक सवारी सवैलाई निर्वाध चल्न दिनु पर्छ । सिसिसिएमसी र डिसिसिएमसीले अवस्था परिस्थिति हेरे बन्द होइन चेतनामूलक सन्देश दिएर सवै सेवा निर्वाध खोल्न खोलाउन मार्ग प्रशस्त गर्न जरुरी देखिन्छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.: ८२२/०७४/७५ पोखरा - ८, न्युरोड, कास्की ०६१-४४२००० +९७७ ९८५६० ३३३९१ [email protected] sa[email protected]